Brenda Thompson Ngwongwo nke Ahịa, Real Estate Broker
Onye Nlekọta Ahịa Ahịa, Ụlọ Ahịa Ala
My Passion bụ Njirimara Pụrụ Iche M Kpọọ Pụrụ Iche "Chọta ..."
Enweghi m ike "ịkpụ" ahụ, yabụ mere ịmepụta ezigbo ala ụlọ ọrụ nke dabara adaba! Abụ m onye ọkachamara ahịa ahịa, ezigbo ụlọ ahịa ere ahịa. Echiche nke Pụrụ Iche "Na-achọ ..." mepụtara site na ahụmahụ m onwe m dịka onye na-azụ ma na-ere tupu mụ abụrụ ezigbo ụlọ ahịa.
Dị ka onye zụrụ, achọrọ m inweta ihe dị iche. Achọrọ m ibi na ihe dị iche. Achọrọ m ụlọ ebe m ga-enwe mmetụta pụrụ iche n'ụlọ. Ịga ebe ahụ gafee otu onye na-ahụkarị ihe ịma aka.
Dịka onye na-ere ere ma nwe nwe ihe pụrụ iche, mgbe oge ruru ka ha ree ha, amaara m na m ga-eme ihe kachasị mma nke ihe onwunwe m. Ebe ọ bụ na m sitere na ogologo ndị edemede na ndị na-ede uri, ekpebiri m iji uri na-akọwa ihe m nwere.
Na 1995 a mụrụ m ụlọ ọrụ. Ebumnuche ahụ bụ ezigbo mgbatị nke àgwà m. Dika onye isi ahia mbu ahia maka New York Stock Exchange, achikotawo ima m maka ihe omuma di iche iche, ahia m ahia, na akwara m, iji me ka umuaka m. "Nchọpụta ..." pụrụ iche ... ... Njirimara nke Njirimara Pụrụ Iche Maka Ndị Na-ahọrọ Ihe Site na Nkịtị.
Ụlọ ọrụ anyị na-elekwasị anya n'ịzụ ahịa ndị pụrụ iche ma dị iche.
Ana m eweta ihe onwunwe na ndụ!
"Ruo ọtụtụ afọ, m rụrụ ọrụ dị ka Director of Marketing maka New York Stock Exchange. Ịchọ nnwere onwe karịa ụlọọrụ America nwere ike inye m, enwetare m akwụkwọ ikike NY Real Estate.
Mgbe m na - arụ ọrụ ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ụlọ akụ na - ahụ maka ala, m na - agbaso onwe m. 'Kuki kuki' ma obu 'mejuputa' bu ihe agagh adi nma nyem, ya mere emeputara m ihe puru iche "choputara ..." maka ndi di ka mu - ndi choro ihe di iche! M meghere ụlọ ọrụ pụrụ iche anyị pụrụ iche na 1995 na Asheville, NC, na ụlọ ọrụ nke abụọ na Hendersonville, NC na 2003. Anyị aghọwo ụlọ ọrụ ahịa ahịa zuru oke na ezigbo ụlọ ahịa. Anyị na-arụ ọrụ naanị site na ndị na-ere ahịa ma na-elekwasị anya na ngwaahịa ndị pụrụ iche.
Anyị na ndị nwe ụlọ gafee United States na ụwa. Anyị na-ewu ma na-ebute mkpọsaahịa mgbasa ozi ahaziri na nke siri ike. Anyị na-agafe karịa ịtụkwasị mgbasa ozi na MLS mpaghara. Anyị na-elekwasị anya na-eme ihe dị mkpa iji dọta onye ziri ezi ziri ezi maka ụlọ ndị dị iche iche. Anyị nwere ike ịjụ ajụjụ ma nyere gị aka ịchọta ezigbo onye ọrụ ma nye ahịa maka ihe onwunwe gị pụrụ iche.
Iji bụrụ nkewa dịka "Nchọta ..." pụrụ iche, ọ dị mkpa ka ihe onwunwe nwee àgwà ya. Ọ nwere ike ịdị mma maka ọnọdụ dị mma, ọ dị obere ma ọ bụ siri ike ịchọta, ọ na-enwekarị ihe ngosi ime ihe pụrụ iche, ọ nwere ike ịbụ ihe pụrụ iche, n'ihi ọnọdụ ya ma ọ bụ echiche ya, ọ nwere ike ịbụ ebe obibi ochie, ebe obibi nke oge ochie , ulo oru ugbo ala ma obu ulo ndi ozo, obosara ala mmiri ma obu ulo oru n'ime osisi.
Ụlọ gị ọ bụ Nchọpụta Ọpụrụiche?
"Abụ m onye na-ede uri, na" Special "Find ..." Kwesịrị ịkọ akụkọ!
NOTI NKE NOSTALGIA - Ulo onu ozo di ka nwatakiri na-adanye n'otu onu ma weputa ya. Ebere na-azaghachi n'ime ụlọ ahụ ka ụmụaka na-akpọ hide-'n-search on lawn. Ugwu na-egbuke egbuke nke tii na nkume n'elu oghere nke ihe nkedo.
Nkume gingham na-agbazi tebụl picnic ebe mbadamba mmiri na achịcha na-eme ka ndị na-agafe agafe. Nostalgia Cottage abughi ebe ndi mmadu na ndi obodo gbakotara kwa afo maka oge di iche iche.
Ụlọ nke Tanner maara nke a na-ewu na 1908, ọ na-ala azụ site n'okporo ụzọ dịka 3 acres. Na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha, na ọhụrụ ụlọ na nnukwu ihe mmelite, ọ na-ọma na ya ụzọ imeghari ohuru.
Mgbidi ya siri ike nwere akụkọ ihe mere eme nke ịhụnanya, ịhụnanya, na mpako, nke doro anya na nkọwa nke ụfọdụ n'ime ihe ndị mbụ ahụ ka fọdụrụ - a na-egbutu osisi oak na osisi ...
APOGEE - Dị ka a ga-esi na-eru maka kpakpando dị n'elu, egwú jupụtara ohere. "Gbanụ ya niile, ọ dịghị onye ga-anụ olu anyị!" Ha wee ... ha wee gbaa egwú. Ndị enyi a na-akpọ, na 17 nkeji oge na-aga, ha zutere ha na ime obodo maka nri abalị.
Apogee, na onye nlekota oru 3950 ', bụ ebe dị elu dị elu Ashville. Na nzuzo na 75 mile mile, ọ na-anọdụ na 14.6, arụmọrụ dị ala, nke kachanụ acre, na-ekerịta oke ala .25 na Blue Ridge Parkway. Na 6420 sq. Ft., Enwere echiche site na ụlọ ọ bụla. Otutu oghere na oche na-akpọ ụtọ ma ọ bụ echiche. Ụfọdụ n'ime njedebe dị elu gụnyere: 2 master suites, ultra-luxurious
mgbe ịsa ahụ, Ngọzi Kuru maka ihu igwe; 2-akụkọ, nkume awụlitere, ọkụ ọkụ na-ere ọkụ, nnukwu kichin, ma ụlọ nkịtị ma dị jụụ, kpụ ọkụ n'ọnụ & amp; ọkụ na-egbuke egbuke ọkụ, ụda ụda nke ọma ma ọ bụ ime ụlọ na-etinye aka na igwe elevator. Obodo ọkụ dị na Asheville dị egwu. $ 1,395,000
ECHIOKWU NDỊ BỤ AJỤ NA-ECHICHE N'ỤLỌ NCHEBỤ NA MAGAZINES. EBE A BỤ N'ỤTỤ ỤLỌ NWA.
Snnce 1991, Brenda Thompson, Onye Ọkachamara nke Ahịa Ala, onye na-ere ahịa ụlọ, na-elekwasị anya, nanị na-anọchite anya ihe ndị pụrụ iche, na-eme ka ha si n'ìgwè ahụ pụta ma mee ka ha dị ndụ. Ọ na-enye ihe onwunwe na nlekọta ya, njirimara ma kọọ akụkọ ya.
Gụọ Isi nke